शीघ्र स्खलन किन हुन्छ ? वीर्य स्खलनलाई कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ ?
जिज्ञासा : एच, धरान
यौन प्रतिक्रिया चक्रका चार चरण (हे. बक्स) मध्ये उत्तेजना र प्लेटो चरणपछिको विशेष महत्त्वपूर्ण चरणमा चरम सुखसँगै पुरुषको वीर्य स्खलन पनि हुन्छ। यसपछि यौनांगमा शिथिलता आई रिजोलुसन (पुरानै अवस्था) मा फर्कन्छ।
कतिपय पुरुषले शीघ्र स्खलनको समस्या गुनासो गर्छन्। प्रायः सबैले अनुभव गरेका पनि हुन्छन्। यौनका दृष्टिले परिपक्व भएदेखि र वीर्य उत्पादन एवं कुनै तरिकाले स्खलन (हस्तमैथुनलगायत माध्यम) सुरु भएदेखि शीघ्र स्खलनको समस्या विद्यमान हुन्छ।
चाँडो वीर्य स्खलन हुने समस्या सापेक्षिक कुरा हो। त्यसैले यसलाई परिभाषित गर्न गाह्रो छ। स्वस्थ व्यक्तिको तीन मिनेटमा वीर्य स्खलन हुन्छ भने शीघ्र स्खलन भएको ठान्ने व्यक्तिले २.३२ सेकेन्डमै वा यौन कार्यको ५ वा १० धक्कामा नै वीर्य स्खलन हुँदा पनि शीघ्र स्खलनको गुनासो गर्न थाल्छन्।
कति समयसम्मलाई शीघ्र र कतिलाई चाहिँ ढिलो भन्ने कुनै स्पष्ट सीमारेखा छैन। तुलनात्मक रूपमा महिलालाई चरम सुखमा पुग्न ढिलो हुन्छ। त्यसैले पनि पुरुषले शीघ्र स्खलनको अनुभूति गर्छ। कतिपयले भने वीर्य स्खलनअगाडि आउने रसलाई वीर्य ठान्ने र यौन फिल्ममा देखाइएको लामो यौन कार्यको दृश्यबाट प्रभावित भई आपूmमा शीघ्र स्खलन भएको शंका गर्छन्। तर, पोर्न फिल्ममा पटक–पटक सुटिङ गरेर यौन क्रियालाई अस्वाभाविक लामो देखाइएको कुरा बिर्सनु हुँदैन।
शीघ्र स्खलन हुनुको मुख्य कारण मानसिक हो। यसले पुरुष प्रजनन प्रणाली वा स्नायु प्रणलीमा खराबी भएको अर्थ लाग्दैन। आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन कि भन्ने चिन्ताले पनि पुरुष ग्रस्त हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो हुन सक्छ। चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन। नियमित रूपमा भयो भने चाहिँ समाधानतर्पm लाग्नुपर्छ। शीघ्र स्खलन कम गर्ने उपायका लागि धैर्य चाहिन्छ।
शीघ्र स्खलन नियन्त्रण सम्भव छ। यौनसम्पर्कका क्रममा वीर्य स्खलन होलाजस्तो भयो भने लिंग बाहिर निकाल्ने अनि यौन उत्तेजना कम भएपछि पुनः चालू गर्ने, पार्टनरको अंगमा ध्यान नदिने, यौन दृश्य तथा यौन परिकल्पना नगर्ने, यौन क्रीडा रोकेर ध्यान अर्कैतर्पm मोड्ने, महिला माथि बसेर यौन क्रीडा गरेमा स्खलन ढिलो हुने हुनाले आसन परिवर्तन गर्ने, स्खलन हुन लाग्दा पार्टनरलाई यौन सम्पर्कको गति धिमा गर्न संकेत गर्ने, स्खलन होलाजस्तो भयो भने लिंगको फेदमा अँठ्याउने, अण्डकोष र मलद्वारबीचको वीर्य नली थिच्ने, कम चिप्लोयुक्त बाक्लो खालको कन्डम प्रयोग गर्ने आदि उपाय अपनाएमा शीघ्र स्खलनको समस्या बिस्तारै हट्छ। महिला माथि बसेर गरिने यौन आसनमा पनि वीर्य स्खलन ढिलो हुन्छ।
लिंगवरिपरिको मांसपेशीको कसरतले पनि शीघ्र स्खलन घटाउन सकिन्छ। यसका लागि दृढ अठोट एवं धैर्यका साथै पार्टनरको सहयोग र समझदारी आवश्यक पर्छन्। यसै गरी, बेन्जोकेन वा लिग्नोकेन भएका औषधि लिंगमा प्रयोग गर्दा पनि वीर्य स्खलन ढिलो गराउँछ। वीर्य स्खलन नियन्त्रण अभ्यासको क्रममा हस्तमैथुन गर्ने, स्खलन हुनै लाग्दा रोक्ने अनि उत्तेजना कम भएपछि फेरि थाल्ने, यो प्रक्रिया दोहो¥याउनुपर्छ। शीघ्र स्खलनको समस्या रहिरहेमा यौन विशेषज्ञ वा मनोरोग विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्छ।
यौन प्रतिक्रिया चक्रका चार चरण
उत्तेजनाः देख्दा, स्पर्श गर्दा, यौनबारे सोच्दा मात्र पनि उत्तेजनाको चरण सुरु हुन्छ। यस चरणमा प्राकक्रीडाको विशिष्ट महत्त्व छ। कसिलो आलिंगन, ओठ चुम्बन, स्तन स्पर्श, नितम्ब स्पर्श, भगांकुर घर्षण, यौनांग स्पर्श गर्ने तथा यौनका लागि संवेदनशील अन्य अंग चलाउने गर्नाले यौन उत्तेजना ह्वात्तै बढ्छ। यस क्रममा पुरुषको लिंग उठ्न थालेर कडा हुन्छ भने महिलामा योनि आसपासका क्षेत्रबाट योनिस्राव उत्पादन हुन थाल्छ र योनिको आकार तथा योनिमार्गमा परिवर्तन आउँछ।
प्लेटोः यौन उत्तेजनापछि यौनसम्पर्क राख्न सकिने भएमा महिला पुरुष दुवै जना प्लेटो चरणमा जान्छन्। यस चरणमा यौन उत्तेजनाको मात्रा बढ्छ। व्यक्तिगत भिन्नताका आधारमा प्लेटो चरण लामो वा छोटो समयको हुन्छ।
यस चरणमा महिला पुरुषमा आ–आफ्नै परिवर्तन हुन्छन्। पुरुषमा अण्डकोष तथा यस माथिको नलीको आकार बढ्ने हुन्छ। यस चरणमा लिंगबाट हल्का चिप्लो पदार्थ निस्किन्छ, जसले यौन क्रियालाई सहज बनाउँछ। महिलामा योनि तथा आसपासको क्षेत्र बढ्छ। स्तनको आकार पनि बढ्छ।
चरमोत्कर्षः यस चरणमा यौन क्रियाको चरण उच्च विन्दुमा पुगी महिला–पुरुष दुवैले अलौकिक आनन्द महसुस गर्छन्। यो चरण सर्वाधिक सुखको चरण भए पनि यसको सम्झना अति छोटो खालको हुन्छ। सफलतम चरम सुखमा महिलामा पाठेघर, योनिद्वार खुम्चिने, फुक्ने हुन्छ। पुरुषमा भने जननेन्द्रियका मांसपेशीमा अझ कडापन आउनुका साथै वीर्य स्खलन हुन्छ। वीर्य स्खलन र चरमसुख प्राप्ति एकै पटक हुने गरे पनि वीर्य स्खलनलाई मात्र चरम सुख मान्न सकिन्न।
रिजोलुसनः महिला–पुरुष चरमसुख प्राप्तिपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने चरण हो यो। दुवै जनाको जननेन्द्रिय तथा शरीरमा आएका परिवर्तन बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ।
यौन चाहना र यौन उत्तेजनाबीच के भिन्नता छ ?
साउन, बोलबम, व्रत र स्वास्थ्य
आफ्नै रगतबाट उपचार
व्रतको समयमा सेक्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन ?
फोटोथेरापीले हट्छ सेतो दुबी